Izixhobo zokulinganisa ukukhanya kwesikrini sekhompyuter | Iindaba zeGajethi
Izixhobo ezi-5 zokuNqanaba ukuKhanya kweScreen seKhompyuter yakho yeWindows
Ukuba ungomnye wabo bantu basebenza imini nobusuku phambi kwekhompyuter yakho, mhlawumbi kufanelekile Thatha inyathelo elingqongqo kwimpilo yamehlo akhoKuba ukukhanya kwesikrini esweni akufuneki kufane kula maxesha.
Emini, ukukhanya ngokubanzi kuphezulu, ngelixa ebusuku kufanele kuthotywe kangangoko kunokwenzeka, ukuze amehlo ethu sukugqiba nge "eyeestrain". Apha siza kukhankanya izixhobo ezimbalwa onokuzisebenzisa ngokulula ukulawula ukukhanya kwesikrini ukuya kwinqanaba, apho amehlo akho engaziva ungonwabanga.
1 Imiba esisiseko ekufuneka ithathelwe ingqalelo malunga nokuqaqamba kwescreen
2 UkuKhanya kweDesktop
3 Itreyi yeBrightness
4 I-RedShift GUI
5 Iphaneli yeGamma
Imiba esisiseko ekufuneka ithathelwe ingqalelo malunga nokuqaqamba kwescreen
Ukuba sithetha ngekhompyuter yakho, inokuba yidesktop okanye ilaptop. Kule yokugqibela kukho izitshixo zomsebenzi ezibekwe ngumenzi ukuze umsebenzisi afikelele kuzo nyusa okanye wehlise ukukhanya kwesikrini. Ungaya nakwiphaneli yokulawula ukuze uhlengahlengise ukukhanya, kukhetho lwamandla; kwelinye icala, ukuba usebenza ngekhompyuter ye-desktop, isikrini siza kuzimela kwi-CPU, ukuze ukwazi fumana ulawulo lokujonga iliso kwi-analog oko kuya kukunceda kwinqanaba lokuqaqamba kwesikrini. Ukuba awukwazi ukumilisela naluphi na ukhetho esele silukhankanyile, sebenzisa esinye sezixhobo esiza kuthi sichaze apha ngezantsi.
Esi sisicelo sasimahla esinokusifaka kwiWindows, eya kuthi igcine i icon kwiitreyi zesaziso zenkqubo yokusebenza.
Kuya kufuneka ukhethe i icon «UkuKhanya kweDesktop»Kwaye usebenzise ibar yesilayida, eya kukunceda uphakamise okanye unciphise inqanaba lokukhanya kwescreen.
"IBrightness Tray" inemisebenzi efanayo kakhulu kwisixhobo esasicebisa ngaphambili, kuba kule meko i icon nayo iya kugcinwa kwitreyi yesaziso.
Xa uyikhetha, iya kuvela isilayida esiza kukunceda uphakamise okanye wehlise inqanaba lokuqaqamba kwisikrini; lo msebenzi ukhatshwa yipesenti yexabiso, eliza kukunceda ukuba uzame ukumisela umlinganiso oza kuwusebenzisa ngamaxesha ahlukeneyo emini.
Ukuba ungomnye wabantu abathanda ukuchaneka kunye nokugqibelela, emva koko unokuzama ukuzama «I-RedShift GUI«, Isixhobo esinezinto ezimbalwa zokhetho onokuzilawula kujongano lwayo.
Elona candelo linomdla kuzo zonke likwiqhosha loqwalaselo, eliza kukunceda uchaze iiparameter ezinje nge ubushushu bemini nobusuku phakathi kwezinye idatha. Ukongeza, ungasebenzisa iqhosha "lendawo", eya kukunceda wenze le nkqubo ukuba ifake idilesi ye-IP yendawo okhoyo kuyo.
«Iphaneli yeGamma»Inenani elikhulu leeparameter ekufuneka zilungisiwe. Umzekelo, unokuchaza ukukhanya, umahluko okanye ukugcwala kwe-gamma ocinga ukuba kufanelekile ukuseta ekubekweni esweni kwakho.
Unokuchaza indlela emfutshane yebhodi yezitshixo eya kukunceda wenze ujongano luvele ngokukhawuleza kwaye uguqule naliphi na elinye ixabiso olifunayo. Ukuba wenze impazamo ekuphatheni kwaye uqale ukubona imibala engaqhelekanga kwiscreen esweni, kuya kufuneka uyenze sebenzisa iqhosha le «setha kwakhona» ukubuyisela yonke into esiqhelweni.
«ScreenBright»Inonxibelelwano olulula nolungqongqo olunokusetyenziswa, nangona amaqhosha alo ngalinye liya kuba luncedo kakhulu xa sifuna ukuseta ubumbeko oluthile lwexesha elithile losuku.
Kungenxa yoko, inokufikelela lungisa ixabiso lokuqaqamba, umahluko, ukugcwala kunye neeparameter ezimbalwa ukuya kuthi kamva "gcina" kuzo ukuze uzifumane kwakhona ngomzuzu owahluke ngokupheleleyo. Ukusuka apha unokusebenzisa ibha yokuhambisa ezantsi, eya kukunceda ufumane ukukhanya okuchanekileyo ngokuxhomekeke kubushushu obukhoyo kwindawo okhoyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Izixhobo ezi-5 zokuNqanaba ukuKhanya kweScreen seKhompyuter yakho yeWindows
Ungayilungisa njani imfiliba yemifanekiso engeyiyo
Iindlela ezi-6 ezikwi-Intanethi ezenza iitshathi zamanani simahla